Dhallinyarada Galguduud oo ku shiray Dhuusamareeb – Radio Muqdisho
Dhallinyarada Galguduud oo ku shiray Dhuusamareeb
Kulan ballaaran oo looga hadlayay dowrka ay dhallinyarada Galguduud ka qaadan karaan horumarka gobolka isla markaana ay u sameysan lahaayeen hoggaan ayaa xalay lagu qabtay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi.
Dhallinyaro isaga timid degmooyinka gobolka ayaa ka qeyb galay kulanka oo ay hadallo ka jeediyeen wasiiru-dowladaha madaxtooyada Mahad maxamed Salaad iyo Xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi.
Qaar ka mid ah dhallinyaradii kulanka ka qeyb gashay ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka qeyb galaan dadaallada lagu horumarinayo gobolka oo ay ugu horreyso maamulka loo dhisayo gobollada Mudug iyo Galguduud.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Galguduud Cabdixakiin Cabdullaahi Warsame ayaa sheegay in maamulka gobolku uu diyaarin doono xaruntii dhallinyarada si ay ugu shaqeeyaan, isagoo tilmaamay in awoodda gobolka wax ka bedeli karta ay tahay dhallinyarada.
Wasiiru-Dowladaha Madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay in dowladdu ay dhiirri galinayso dhallinyarada, isla markaana ay dowr muhiim ah ku leeyihiin mashaariicda dalka lagu horumarinayo iyo siyaasadda guud ee dowladda.
Wuxuu sheegay in dhallinyarada ku jirta hay’adaha dowladda sida xukuumadda iyo Baarlamaanka ay yihiin tiro dhiirri galin leh, ayadoo ay xukuumaddu sii xoojin doonto awood siinta dhallinyarada.